Otomatiki zai kurongedza muchina
Yai yekuisa uye kurongedza muchina
Mashizha ekuisa mazai
Mashina ekuwachisa mazai
Zai peeling muchina
Zai rinoputsa muchina
Mashoma epurazi zai kurongedza muchina
Mintai diki purazi zai kurongedza muchina unoshandiswa zvakanyanya muhuku (kana dhadha) mapurazi uye mazai ekugadzira zvirimwa. Kana iwe uine zvimwe zvinodiwa, inogona kuve yakagadzirirwa nezai washer, evha dryer, makenduru, kana evha grader pamwechete. Deredza mutengo wevashandi. Iyo yakagadzirirwa nehunhu hweyakareruka, hwakavimbika, inochinjika uye yakasimba, iri nyore kushandisa nekuchengetedza.
ZI kurongedza MACHINE
Mintai zai kurongedza muchina unoshandiswa zvakanyanya muhuku (kana dhadha) mapurazi uye mazai ekugadzirisa zvirimwa. Izvo zvinokodzera mhando dzakasiyana dzezvinhu tireyi. Deredza mashandiro evashandi uye unatsiridze kushanda kwemabasa. Iyo yakagadzirirwa nehunhu hweyakareruka, hwakavimbika, inochinjika uye yakasimba, iri nyore kushandisa nekuchengetedza.
MT-201 zai rinobika uye rekugadzira zvigadzirwa mutsetse
MT-201 zai rinobika uye rekucheresa kugadzirwa mutsara ndeyedu Min Tai kambani yakazvimirira yekutsvaga uye yekuvandudza chigadzirwa, yekugadzira tambo seti ye otomatiki Optical kuongorora, kuchenesa, mazai, kufashaidza, kufashaidza, kutonhora, peeling, kunhonga, otomatiki kuverenga, kubika, kuomesa uye mamwe mashandiro, parizvino ndiyo tekinoroji yepamberi, inotsigira yakanyanya kukwana, yakanyanya kukura chena kugadzira zai kugadzira mutsara.
MT-500 Egg kutyora muchina
Otomatiki zai kuputsa muchina kutevedzera ekugadzira ekugogodza mazai, kubva ku "Yai kurodha - Yai kutyora" uye kumwe kuenderera kwekushanda kushanda, kunatsiridza kugadzirwa kwekuita uye kudzikisa mari yevashandi.
Zai kurongedza uye kurongedza Muchina
Yai yekuisa uye kurongedza muchina kwakabatana nemutengi mazai epakati yekuunganidza sisitimu, kana inogona kuve yakabatana neyeza yekuwachisa muchina, zai kuomesa, UV sterilization, oiri kupfeka, kana zai kenduru. Nechiremera chinotangira pamakumi matatu ezviuru / h kusvika 60,000egs / h.
MT-110D Kutsemura zai grader kurongedza muchina
Kuchekera zai kutapa uye kurongedza muchina wekuchaira zai kana nyowani zai, inogona otomatiki giredhi zai uye kurongedza mune mumwe muchina.
Hatching zai kurongedza muchina
Kuchekera zai kubatira uye kurongedza muchina wekurumisa zai, inogona otomatiki kuisa uye kurongedza nemuchina mumwe chete.
Mazai packer muchina
Kubudikidza nekoramu yese pakutakurwa kwemazai saizi musoro kuti uchinje, kuverengera musoro wezai wakabatanidzwa kumusoro, kuverengera kutsva kwekuchengeta zai.
Egg kurongedza muchina
Mintai zai kurongedza muchina unoshandiswa zvakanyanya muhuku (kana dhadha) mapurazi uye mazai ekugadzira zvirimwa. Deredza mutengo wevashandi. Iyo yakagadzirirwa nehunhu hweyakareruka, hwakavimbika, inochinjika uye yakasimba, iri nyore kushandisa nekuchengetedza.
a) Muchina uyu unogona kuve unobatana nemazai epakati ekuunganidza sisitimu kana evha yekuchenesa yekugadzira mutsara; b) Iri kukora nehuremu hwezai uye kurongedza otomatiki, uku uchigadzirisa huwandu kumusoro, hwakanaka kune zai kuchengetedza. c) Iyo inokodzera 6 * 5 = 30 mapepa tireyi kana mapurera epurasitiki; d) unogona kusarudza otomatiki kutumira kana manyore kutumira.
Zai Kuchengeta uye kurongedza Muchina
a) muchina uyu unogona kubatana nemazai epakati kuunganidzwa system kana zai yekuchenesa yekugadzira mutsara. b) iri kukora nehuremu hwezai uye kurongedza otomatiki, uku uchigadzirisa huwandu kumusoro, hwakanaka kune zai kuchengetedza. c) Kubata chinovhara mashandiro, inogona kuiswa kumatanho akasiyana ehuremu, anosvika kumakirasi matanhatu. d) inokodzera 6 * 5 = 30 mapepa tireyi kana epurasitiki matray e) unogona kusarudza otomatiki kutumira kana manyore kutumira
Zvemagetsi mazai ekuisa muchina
Mazai emagetsi anorema kuisa muchina, anogona kuiswa pamatanho akasiyana ehuremu uye huwandu hwenhamba yematanho, kubata screen oparesheni uye kutonga, zviri nyore uye zvinoshanda.
Hatching Egg Packer, Egg Kuronga Uye Kurongedza Machine, Otomatiki Egg Kuputsa Muchina, Zai kurongedza muchina, Egg Kupwanya Muchina Vagadziri, Yakabikwa Zai Kutemesa Muchina,